Baaritaanka burburka diyaaradii Ethiopian Airlines • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Baaritaanka burburka diyaaradii Ethiopian Airlines
Baaritaanka burburka diyaaradii Ethiopian Airlines
Shirkada Boeing ayaa sheegtay inay wax ka bedali doonto barnaamijka uu ku shaqeeyo computer-ka laga hago diyaaradaasi kadib shilkii Axadii lasoo dhaafay ee diyaaradii Ethiopian Airlines ee kusoo dhacday duleedka magaalada Addis Ababa.
Shilkan oo noqonaya kii labaad oo diyaaradan noocaan ah ee 737 MAX8 oo soo dhacda muddo 5 bilood gudahood ah ayaa keentay su’aalo badan oo la iska weydiinayo inay cilad weyn ku jirto computerada laga wado diyaaradaasi.
Qaar kamid ah dalalka isticmaala nooca diyaaradan ayaa sheegay inay joojiyeen si kumeel gaar ah oo baaritaan loogu sameeyo, walow ay shirkada Boeing weli ku adkeysaneyso inaysan jirin cilad weyn oo ku jirta diyaaradaasi oo ah nooca ugu badan oo ay soo saaraan.
Bishii Oktoober ee sanadkii hore ayey isla diyaarad noocaan ah burburtay, diyaaradaasi oo ay lahady Shirkada Lion Air ee dalka Indonesia ayey ku dhinteen 189 qof.
Diyaaradii Ethiopian Airlines ee Axadii ka duushay Addis Ababa kuna sii jeeday magaalada Nairobi ayaa la sheegay inay soo dhacday 6 daqiiqo kadib markii ay hawada gashay, waxayna kusoo dhacday goob 60km u jirta caasimada Itoobiya, waxayna goob-joogayaal sheegeen inay arkayeen diyaarada oo uu dab-qabsaday kahor inteysan burburin.
— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11 March 2019
Kooxda baareysa burburka diyaaradii Ethiopian Airlines ayaa sheegay inay heleen dhamaan qalabka kaydiyada xogta diyaarada oo ay hada baaritaan kuwadaan waxa keenay shilkan ay ku dhinteen 157 qof.
Shirkada Ethiopian Airlines oo hada ah shirkada duulimaadka ee ugu weyn qaarada Afrika ayaa sheegtay inay joojisay isticmaalka 8 diyaaradood oo kale oo ah noocaan 737 MAX8 oo ay dhawaan soo gadatay.
Dalka Indonesia ayaa sidoo kale joojiyey isticmaalka 11 diyaaradood oo noocaan ah, halka wadanka China la joojiyey isticmaalka diyaaradan 737 MAX8 oo ay soo gateen dhowr shirkadooda oo dalkaasi laga leeyahay.
Dowladaha Australia iyo Singapore ayaa maanta oo Salaasa ah sheegay inay joojiyeen gebi ahaan isticmaalka diyaaradan Boeing 737.